News - Okwu mmalite nke eyi gbazee fụọ ákwà
Okwu Mmalite nke eyi gbazee blown akwa ákwà
Agbaze fụọ ákwà (gbazee blown na-abụghị kpara akwa) bụ ngwaahịa mere nke elu-gbazee index eyi (polypropylene) mejupụtara na-abụghị kpara akwa. Ọ bụ isi ihe nke nkpuchi. Akara nke eriri spinneret nwere ike iru 0.001 na 0.005 mm. E nwere ọtụtụ voids, N'ụbọchị nke abụọ, Ọdịdị, ezi ndọlị na-eguzogide, na pụrụ iche capillary Ọdịdị. Ultrafine fibers na-eme ka ọnụọgụ na elu nke eriri dị iche iche n'otu mpaghara, nke mere na akwa meltblown nwere ezigbo filterability, ọta, mkpuchi ọkụ na ntinye mmanụ. . Ya isi ojiji na-agụnye ikuku filtration, acid-na-agbasa mmiri mmiri filtration, nri ịdị ọcha filtration, ulo oru ájá-àmà nkpuchi mmepụta, wdg Ke adianade do, ọ nwekwara ike-eji dị ka ọgwụ na ahụ ike na ịdị ọcha na ngwaahịa, ulo oru nkenke kpochapụ, thermal mkpuchi ihe, oil- na-adọrọ ihe, ndị na-ekewa batrị, na akwa akwa akpụkpọ anụ. na ọtụtụ ndị ọzọ. Kemgbe ntiwapụ nke okpueze ọhụrụ ahụ, Kọmitii na-ahụ maka nchịkwa na nchịkwa nchịkwa nke State Council rịọrọ ka ụlọ ọrụ ndị dị mkpa iji mee ka ngwa ngwa nke usoro mmepụta ngwa ngwa, tinye n'ime mmepụta ngwa ngwa o kwere mee, ma gbasaa ọkọnọ nke ndị na-adịghị mma. n'ahịa iji nye nchebe maka igbochi na ịchịkwa ọrịa ahụ.
Mpaghara eji eme ihe:
1. Ngwa na ubi nke ikuku ọcha: eji na ikuku ọcha, dị ka a elu-arụmọrụ ikuku nyo mmewere, na-eji maka keadighi rake na-ajụ-arụmọrụ ikuku filtration na ibu eruba udu. Ọ nwere uru nke nkwụsi ike dị ala, ike dị elu, ezigbo acid na nguzogide alkali, nguzogide corrosion, arụmọrụ siri ike, ndụ ogologo ndụ, na ọnụ ala.
3. Liquid nyo ihe na batrị diaphragm: Polypropylene gbazee fụọ ákwà na-eji iyo acidic na alkaline liquids, mmanụ, wdg Ọ nwere nnọọ mma arụmọrụ, a na-ahuta ka ezigbo diaphragm ihe site batrị ụlọ ọrụ n'ụlọ na mba ọzọ, na ejirila ọtụtụ ebe, Ọ bụghị naanị na-ebelata ọnụ ego batrị ahụ, na-eme ka usoro ahụ dị mfe, ma na-ebelata ibu na olu batrị nke ukwuu.
4. Ihe na-adọrọ mmanụ na ihe nhichapụ ụlọ ọrụ: ihe dị iche iche na-amị mmanụ nke e ji akwa polypropylene meltblown mee, nke nwere ike ịmịkọrọ mmanụ ruo 14-15 ugboro ibu ha, na-ejikarị ya na ọrụ nchekwa gburugburu ebe obibi na ọrụ nkewa mmanụ na mmiri. Tụkwasị na nke a, a na-eji ha eme ihe na mmepụta ihe. , Enwere ike iji ya dị ka ihe dị ọcha maka mmanụ na ájá. Ngwa ndị a na-enye egwuregwu zuru oke na njirimara nke polypropylene n'onwe ya na adsorption nke ultrafine fibers nke meltblown mere.
5. Ihe mkpuchi ihe na-ekpo ọkụ: Ogologo dayameta nke eriri meltblown dị n'etiti 0,5-5 madem, a na-emekwa ha ozugbo n'ime akwa ndị na-abụghị nke a kpara akpa site na itinye usoro. Ya mere, ebe a kapịrị ọnụ nke eriri meltblown buru ibu ma porosity dị elu. A na-echekwa nnukwu ikuku na nhazi a. , Nwere ike n'ụzọ dị irè gbochie okpomọkụ ọnwụ, bụ ihe magburu onwe nzacha na mkpuchi ihe onwunwe. A na-ejikarị ya eme ihe na mmepụta uwe na ihe dị iche iche na-ekpuchi ọkụ. Dị ka jaket akpụkpọ anụ, uwe elu, uwe na-enweghị oyi, akwa owu, wdg, ọ nwere uru nke ịdị arọ dị ọkụ, ikpo ọkụ, enweghị mmịrị mmiri, ikuku ikuku dị mma, na enweghị ebulu.